Umanyano: Iqonga lokuSebenza kweNtlalo | Martech Zone
Nyeneyo ibonelela ngetekhnoloji yokuthengisa ilifu kunye nokusetyenziswa okwenza ukuba umbutho wakho ulawule yonke indlela yokuphila yentengiso, ukuhambisa i-ROI ecacileyo nenenqobo. Iqonga eliManyeneyo libonelela ngenkqubo emanyeneyo yokurekhoda iimveliso, iiarhente kunye nabathengisi.
iinzuzo IQonga lokuSebenza eliDibeneyo loLuntu
Yeyakho kwaye ulawule idatha yakho yentengiso -Iqonga lokuSebenza kwezeNtlalo lidibanisa zonke iiarhente, abathengisi kunye neempawu osebenza nazo kwinkqubo enye yokuthengisa ngelifu, ikunika umbono opheleleyo wayo yonke intlangano yakho yentengiso. Xhobisa inkampani yakho ukuba ihambe ngokukhawuleza kwaye yenze iinguqu- ungatshintsha iiarhente, abathengisi okanye amaqela angaphakathi ngaphandle kokulahlekelwa yimbali.
Yenza imikhankaso yentlalo enzima -Fikelela kubathengi ngexesha elifanelekileyo, kunye nomyalezo olungileyo, kwiinethiwekhi zonxibelelwano ezininzi ukusuka kwiqonga elinye. Iqonga lokuSebenza kwezeNtlalontle lenza abaphathi babahlali, abacwangcisi beendaba kunye neearhente zoyilo ukuba basebenzele ukufikelela kwinjongo enye- ukwenza abaphulaphuli bakho basebenze.
Nokwandisa imithombo yeendaba ehlawulelweyo, eyeyakho kunye neyokufumana -Yenza yonke idola oyichitha kwimithombo yeendaba ukuba iqhubele phambili- jonga ngaphaya konqakrazo kunye nokubonakala kwaye uqalise ukulungelelanisa ifuthe eliphezulu ngokuqonda indlela imithombo yeendaba ehlawulelweyo eyenza ngayo ixabiso lemithombo yeendaba elongeziweyo xa abantu bezibandakanya nomxholo wakho. Iqonga lokuSebenza kweNtlalontle sisisombululo kuphela esidibanisa ukuhlawulwa, ukubakho kunye nokufumana imithombo yeendaba.
Guqulela idatha enkulu kwi-ROI -Yenza lula ingxelo yakho ngokwabela iintshukumo zentlalo (ukuthanda, amagqabantshintshi, izabelo, ii-tweets, njl.njl) ixabiso labo leedola, elikwenza ukuba uthelekise kwaye ulungiselele ukubuya okuphezulu kutyalo-mali. Nika amandla wonke umntu kwiqela lakho ukulinganisa ukusebenza ngokusekwe kwi-ROI, endaweni yokugxila kwiimethrikhi ezithambileyo okanye ezingacacanga njengokuzibandakanya okanye ukufikelela.
Yenza izigqibo eziqhutywa yidatha -IQonga lokuSebenza kweNtlalontle liqhele kwaye lilinganise idatha yakho yentengiso yokuhambisa iimpendulo kwimibuzo enjengeliphi iqonga elenze eyona ROI inkulu kweli phulo? Nguwuphi umthengisi okanye i-PMD esebenze kakuhle ngexesha elinikiweyo? Singayichitha njani imali kwintengiso yoluntu ngokufanelekileyo?
Ubomi obuDibeneyo beNtlalo
tags: eendaba ezuziweyoabeendabaImidiya ehlawulwayoamaphulo entlalontleinkqubo yokusebenza koluntusimanyeneintlalo emanyeneyo
Thengisa, iNkonzo kunye neNtengiso ngeSalesforce1
I-SEO xa ithelekiswa ne-SEO eNtsha